Zụlite Mmekọrịta Gị na Obodo | Martech Zone
N'ime ụlọ ọrụ anyị, mmalite mmekọrịta mmadụ bụ ihe achọrọ. Ọ bụrụ na ị bụ onye ndoro-ndoro ochichi na-achọ ọrụ na mgbasa ozi mmekọrịta, ị ga-enwe nnukwu netwọk na ọnụnọ n'ịntanetị. Ọ bụrụ na ị bụ nwa akwukwo na-achọ ọrụ na njikarịcha search engine, m ga-enwe ike ịchọta gị na nsonaazụ ọchụchọ. Y’oburu n’icho onye oru ichoro inweta ahia nke ihe di n’ime ya, kari kari ihu ihe a ma ama n’ime blog gi.
Ihe achọrọ maka a na-elekọta mmadụ malitegharịa na-agabigaghị ụlọ ọrụ anyị ugbu a. Rationslọ ọrụ na ndị na - ewe ndị ọrụ n'ọrụ na - eji saịtị mgbasa ozi mmekọrịta na igwe na - achọ ihe - ọ bụghị inyocha ndị na - aga ime - mana ọbụladị ịchọta ha. Ha nwere ike ịchọta gị? Na-ewu ikike na ntanetị maka akara aka gị?
Dijitalụ mmekọrịta ọha na eze na-amaliteghachi n'oge a na omenala. Ọ bụ ezie na ị ga-enwerịrị ahụmịhe ọrụ gị na agụmakwụkwọ gị na mmekọrịta gị na ndị ọzọ, ị nwere ike ịgbasa ozi ị nyere ndị nwere ike iwe gị n'ọrụ ịgụnye ụdị ọrụ, njikọ dị mkpa na ndị ọzọ.
Tags: ikikenyocha ọrụndị nchịkọtambanyena-elekọta mmadụ malitegharịa
Jenụwarị 25, 2013 na 2:10 PM
egwu post na infographic!